Izinhlobo | Septhemba 2021
“U-Auggie” angaba esinye seziteketiso esinqumayo, kodwa ingxube ye-Australian Shepherd Corgi ingeyayo. Funda uma ufuna inja enhle kodwa esebenza kanzima!
Umxube wase-Australia Shepherd waseGerman: Inja enhle kunazo zonke?
Uma uzingela inja yokwelusa yokugcina esebenza kakhulu futhi engenza cishe noma yini? Ungabheki ngaphezu komxube wase-Australia Shepherd waseJalimane!
Ingabe i-A.S.Australia ye-Austrian's Shepherd i-Husky i-MP3 i-MP3 ihlanganisa i-Right?
Le pooch iyinhlanganisela yezinja ezimbili ezisebenzayo - enye ingumalusi, kanti enye ingumshini odonsa isihlibhi. Hlangana nenhlanganisela enamandla yase-Australia Shepherd Husky!
Ucabanga ukuthenga inja esebenzayo? Funda umhlahlandlela wethu ophelele kumxube we-Australian Shepherd Lab ukuthola ukuthi ngabe yinja ekufanele yini le!
Umalusi wase-Australia - Ongakulindela Kuloluhlobo Lokuzala Inja
Abelusi base-Australia bangabantu bezinhlobo ezahlukahlukene ngempela. Akuzona nje izinja ezishesha ukusebenza, kepha futhi zihlakaniphe kakhulu futhi zingabangani bomndeni abahle kakhulu.
I-Terrier yase-Australia: Konke Okudingayo Ukuze Ukwazi Ngalenja Yezinja
I-terrier encane yase-Australia ingumzingeli omncane onenhliziyo yengonyama, onomoya, futhi ohlakaniphile ekuqaleni owazalelwa ukuzingela amagundane nezinyoka.
IBasenji ingumzingeli kepha akuyona into ebonakalayo yakudala noma iphunga. IBasenji, igagasi elisenkabeni ye-Afrika, ingenye yezinhlobo ezindala kunazo zonke ezisekhona. Izinja zohlobo lweBasenji zitholakala kubuciko basendulo baseGibhithe. Umlando wanamuhla wezinsalela zohlobo kuze kube sekhulwini lama-20 leminyaka lapho ... Funda kabanzi
Uthando olunokhiye ophansi: uzwile nge-Basset Hound ethembekile?
Wake wafuna inja esebenzayo noma yasensimini enezinga eliphansi lomsebenzi? Ngamehlo abo alengayo nezindlebe ezinde, ama-Basset Hounds kufanele abe kuhlu lwakho!
Izingxube ze-36 Basset Hound to Love in Right Now
Ama-Basset Hounds athandeka ngokukhethekile, kodwa inguqulo ye-purebred ingahle ingabi yile nto oyifunayo. Isixazululo - uhlu lwezinhlanganisela zeBasset Hound.
Iyini inja yeBeabull, futhi kufanele uyithole?
Uyazithanda izinja zomklami? Ufuna i-pal enoboya enhle, edlalayo, nesilwane somndeni esihle kakhulu? Ngemuva kwalokho, ungabheki ukudlula ukuxuba kwe-Beagle Boxer AKA Beabull.
Ingabe iBeagle enamandla ingumculi ophunyuka kakhulu?
Thola konke odinga ukukwazi ngeBeagle ethandekayo, kusukela ekunakekeleni kahle lo mdlwane odlalayo kuye kulokho ongakulindela ngokwezinkinga zempilo.
Ingabe i-Beagle Basset Hound ejabulisayo ihlanganisa inja yomndeni enhle?
Ufuna umngane wokuzingela? Ukuhlanganiswa kweBeagle Basset Hound (AKA Bagle Hound) kungaba yiphunga lokugcina! Thola okuningi mayelana nalokhu kuqhekeka lapha.
Konke mayelana ne-Beagle Lab Mix
Umxube weBeagle Lab ungumbombayi onobuhlakani ohlale efuna ukuhlola indawo yakhe. Thola ukuthi ngabe le nja edlalayo ifana kahle nomndeni wakho.
I-Beaglier iyinhlangano enamandla futhi ethembekile phakathi kweBeagle neNkosi yamaCavalier uCharles Spaniel. Ngabe ukulungele ukuthola okwengeziwe ngale pooch yomklami?
I-Bearded Collie - Yini Ongayilindela Kulenja Yezinja
IBearded Collie, ebizwa ngothando ngokuthi yiBeardie, yathuthukiswa eScotland njengenja eyelusayo. Okhokho bawo kungenzeka babefaka nezinja zokwalusa ezwenikazi laseYurophu, njengePoland Lowland Sheepdog (Polski Owzcarek Nizinny) kanye neKomondor, ezihlanganiswe nezinja zokwalusa izimvu zaseBritish Isles. Yakhiwa njengesisebenzi esizimele, ekwazi ... Funda kabanzi
Ngabe uMalusi waseBelgian Malinois waseJalimane ukuxubela inja?
Yini ongayithola uma uxubanise inja esebenza ezingeni lomhlaba kanye nayo yonke indawo? Hlangana nenja yomklami, iBelgian Malinois German Shepherd. Funda Lapha!
Okufanele Ukwazi Nge-Bernedoodle
Poofy and goofy, i-Bernese Mountain Dog Poodle Mix noma i-Bernedoodle iyi-hybrid ebuye ibe mnene futhi ihlakaniphe. Yazi kabanzi ngabo lapha!
Inja Yentaba yaseBernese - Ongakulindela Kule Nja Yokuzala
Igama elithi Bernese Mountain Dog lihunyushwe kabi ngesiJalimane esithi 'Berner Sennenhund,' okusho ngokwezwi nezwi ukuthi Inja kaBernese Alpine Herdsman. Igama lohlobo lolo kwakunguDurrbachler, ngemuva kwendlu yezihambi lapho lezi zinja zasepulazini zathengwa futhi zathengiswa khona. Uhlobo lwanamuhla lwakhiwa izinja ezitholakala emaphandleni azungeze iBern, eSwitzerland futhi kuphela ... Funda kabanzi
Umhlahlandlela wakho kokudla kwenja okuhle kakhulu kwe-Golden Retrievers
Unenkinga yokunquma ukuthi yikuphi ukudla nomkhiqizo ozokunika iGoldie yakho? Lo mbhalo uzoba umhlahlandlela wakho wokugcina wokwazi ukudla kwezinja okuhle kakhulu kwamaGolden Retrievers.
Yikuphi ukudla kwezinja okuhle kakhulu kwamaLabhu?
Ngezansi uzothola ukukhetha kwethu okuphezulu kokudla kwezinja ezisezingeni eliphakeme okuthambile esiswini somdlwane wakho okuhlangabezana nezidingo zenja ezondlayo zokudla okunomsoco.
Inja yami izoyithola kangakanani i-calculator
jack russell kuxutshwe ne-chihuahua
umalusi wase-australia u-blue heeler mix umdlwane
uyini umdlwane we-whoodle
amagama ezinja zamalebhu esiliva